नयाँ बजेट Archives - Lokpati.com
Tag - नयाँ बजेट
नयाँ आर्थिक वर्ष : गण्डकी प्रदेशकाे बजेट कति ?
कास्की, १ असार । गण्डकी प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट बिनियोजना गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाखको बजेट पेश गरेका हुन्...
यस्तो छ बजेटबारे कांग्रेसको प्रतिक्रिया (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, १८ जेठ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि तर्जुमा गरिएको बजेटमा १० बुंदे असहमति राखेको छ।
बजेटबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश...
नयाँ बजेट : यी हुन् मूख्य १५ बुँदा
काठमाडाैं, १६ जेठ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट संघीय संसदमा पेश गरेका छन्। जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीयतर्फ १...
नयाँ बजेट : प्रदेश र स्थानीय तहले कति पाए ?
काठमाडाै‌ं । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक भएको छ। बजेटमा संघीय सरकारले प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड बजेट अनुदानमा दिने भएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा खर्चको...
काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेट बुधबार संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ। दुई तिहाइ जनमतसहितको सरकारको पहिलो बजेटले जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको तथा पार्टी घोषणापत्रलाई नै बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भएपछि...
आगामी बजेटमा शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता दिन्छौं : रेनु दाहाल
चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाको आगामी बजेट समग्र विकासमा लगाउने बताएकी छिन्। भरतपुरमा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रि–बजेट अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा महानगर प्रमुख दाहालले गएका वर्षहरुमा पूर्वाधार विकासमा अझ...
काठमाडौं, ३ जेठ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेटका बारेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक छाता संस्थाहरुले संयुक्त सुझाव पेश गरेका छन् ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य...